Wararka Dibada | Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan | Page 70
Taliye sare oo katirsan Ciidamada Masaarida oo lagu iqtiyaalay Al-Qaahira.
Kooxo hubeysan islamarkaana kaxeysanayay mootada dheereysa ayaa dilay mid kamid ah Taliyaasha Ciidamada Masaarida kuwooda ugu jagada sareeya, xilli uu kasoo baxayay gurigiisa. Sarkaalka la dilay oo oo lagu magacaabo Caadil Rajaa’ii ayaa jagadiisu waxay ahayd Sarreeyo guuto, wuxuuna kamid ahaa Saraakiisha jugta culus ee ciidanka Afgembiga Masar. Isagoo kasoo baxayay gurigiisa oo ku yaala mandiqadda Al-Cubuur ee bariga Al-Qaahira ...	Read More »
Dowladda Talyaaniga oo Albaabada isugu dhufatay Masaajid ay ku cibaadeystaan Muslimiinta, iyo Muslimiinta oo arinkaas ka xumaaday.
Talyaaniga oo kamid ah dalalka dhaca qaaradda Yurub islamarkaana dagaal fog lasoo galay dadka Muslimiinta ah ayaa haatan wuxuu gudaha dalkiisa ka wadaa tallaabooyin lagu curyaaminayo Islaamka kusiii fidaya dalkaas, iyadoona dowladda Talyaanigu billowday iney xirto Masaajida Muslimiintu ku tuktaan. Ugu yaraan shan masjid ayay dowladda Talyaaniga xirtay mudooyinkii ugu dambeeyay, waxaana ay ku andacootay in Masaajidan ay ku yaalaan ...	Read More »
Ciidamo Maraykan ah oo lagu dilay weerar ka dhacay magaalada Kaabul.
Qof ku labisan Dareeska Ciidamada milliteriga Xukuumadda Kaabul, islamarkaana katirsanaa ciidamada Xukuumadda Kaabul ayaa weerar khasaare dhaliyay ka fuliyay saldhig ku yaala magaalada Kaabul oo ay ku suganyihiin Ciidamo Maraykan ah. War kasoo baxay Ururka Naato ee duulaanka shareeca la dirirka ah ku qaaday dalka Afqaanistaan sanadkii 2001 ayaa lagu sheegay in weerarka ka dhacay saldhiga Milliteri ee Rishkor lagu ...	Read More »
Dowladda Turkiga oo ku faaneysa iney qayb ka tahay duulaanka lagu qaaday magaalada Muusil.
Iyadooo maalintii labaad uu socoda duulaanka Rawaafida iyo Reer Galbeedka oo is kaashanay ay ku qaadeen magaalada sunniga ah ee Muusil ayaa waxaa wali jirin horumar la taaban karo oo ay kasooo hooyeen dagaalladaas, waxaana magaalada Muusil wali ku jirtaa gacanta Ahlu sunnaha. Dowladda Turkiga oo caan ku ah hagar daameynta shucuubta Muslimiinta ah ayaa si cad ugu faaneysa in ...	Read More »
Xabsiga sumcada daran ee Guwanatanmo oo ay ku xiranyihiin maxaabiis farabadan oo Muslimiin ah ayaa wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in lasii daayay Maxbuus muslim ah oo inkabadan toban sano u xirnaa dowladda Maraykanka. Maxbuuska lasii daayay ayaa lagu magacaabaa Muxamed Walad Salaaxi, wuxuuna 15 sano oo xiriir ah ku xirnaa xabsiga dulmiga iyo sumcad darada u saaxiibka ah ee ...	Read More »
Markii ugu horeysay dowladda Ruushka ayaa ciidamo milliteri waxay keentay mid kamid ah dalalka qaaradda Afrika dhaca, waxaana tallaabadaas lagu tilmaamayaa mid muujineysa ahdaafta fog fog ee gumeysiga ku saleysan ee Ruushku ka leeyahay dalalka Islaamka. Dowladda Masaarida oo kamid ah dowladaha sida adag dagaalka ugula jira Islaamka iyo Muslimiinta ayaa u aragta faragelintan iyo duulaankan Ruushka soo qaaday mid ...	Read More »
Sarkaal sare oo katirsan ururka Xisbullaata oo lagu dilay dalka Suuriya.
Warbaahinta Ururka shiiciga ah ee Xisbullaah ayaa shaaciyay dhimashada mid kamid ah Saraakiisha ugu sareysa ee ururkaas ka joogay dalka muslimka ah ee Suuriya, kaas oo ku dhintay dagaallada u dhexeeya Mujaahidiinta iyo Nidaamka Suuriya. Sarkaalka la dilay oo lagu magacaabo Xaatim Xamaada oo caan ku ahaa Al-Xaaji Calaa ayaa lagu dilay dagaallada ka socoda magaalada Xalab, isagoo kormeeerayay malleeshiyaadka ...	Read More »
Reer Galbeedka iyo Rawaafida Ciraaq oo Xamlo diin la dirir ah kaga dhawaaqay gobolka Neynawaa ee dalka Ciraaq!!
Muslimiinta dalka Ciraaq ayaa wajahaya xamlo dagaaleed kulul oo uga imaaneysa isbaheysiga Reer Galbeedka oo garab taagan Rawaafida dalkaas, kuwaas oo doonaya iney dib u qabsadaan dhul ka maqan gacantooda oo ay ku suganyihiin Ahlu Sunnaha dalka Ciraaq. Warbaahinta Caalamka noocyadooda kala duwan ayaa aad u hadal haya xamlo dagaaleed ay iclaamisay dowladda Maraykanka taas oo ay ku dooneyso iney ...	Read More »
Markab Maraykanku leeyahay oo la kulmay weerar Sawaariikh ah.
Wasaaradda Gaashandhiga dowladda Maraykanka the Bentagonka ayaa shaacisay in mid kamid ah maraakiibteeda dagaalka ee ku sugan Badda Cas uu la kulmay weerar Sawaariikh ah. Warka kasoo baxay Wasaaradda ayaa lagu sheegay in markabka Maysoon uu markii sadexaad todobaad gudihiisa la kulmay weerar Sawaariikh ah oo uga imaanaya dhanka xeebaha Yaman, waxaana illaa iyo hadda la ogeyn cida soo ridisay ...	Read More »
Iyadoo dagaalka dalka Suuriya uu galayo marxalad adag islamarkaana Muslimiinta halkas ku dhaqan ay isugu soo habar wacdeen Gaalada Aduunka ayaa dhanka kale Mujaahidiintu waxay wadaan is uruursi iyagoo gaaraya midnimo dadka Muslimiinta ah ku farxeen. Iyadoo dhawaan Jamaacada Jundul Aqsaa ay si buuxda beyco ula gashay Jabhadda Fatxu-Shaam ayaa waxaa tallaabadaas ku dayday Afar Jamaaco Jihaadi ah oo ka ...	Read More »